Avereno jerena ny Doogee Ibiza F2 | Androidsis
Miverina izahay miaraka amin'ny fanadihadihana vaovao amin'ny terminal iray avy amin'ny marika sinoa Doogee malaza, marika iray izay miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana sy ny asany tsara, dia mahazo mpanaraka tsy misy fepetra na aiza na aiza no ampahafantarana azy. Amin'ity indray mandeha ity dia hasehoko anao ny Doogee Ibiza F2 famerenana, terminal vaovao natomboka vao herinandro vitsivitsy lasa izay nikendry ny hiady amin'ny ambaratonga fidirana ambaratonga misy ny rafitra fiasa Android.
Amin'ity indray mitoraka ity dia manana terminal misy efijery izahay 5 ″ IPS sy 960 x 540 teboka famahana nifindra tamin'ny processeur tsy mandinika Mediatek 6752 quad-core 1,2Ghz miaraka amin'ny teknolojia 64-bit miaraka amin'ny tena tsara Mali T760 GPU afaka mamindra ny karazana lalao Android sy ny rindranasa rehetra. Terminal eo am-pelatanantsika ho an'ny marina $ 129,99 ary etsy ambany dia holazainay aminao ny hery sy ny fahalemeny.
1 Famaritana ara-teknika an'ny Doogee Ibiza F2
2 Ny tsara indrindra amin'ny Doogee Ibiza F2
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Doogee Ibiza F2
Famaritana ara-teknika an'ny Doogee Ibiza F2
modely Ibiza F2
efijery IPS 5 "misy vahaolana qhd 960 x 540 sy 240 ppi
processeur MTK6752 QuadCore amin'ny teknolojia 1 Ghz sy 2-bit
Fitahirizana anatiny 8 Gb dia nizara roa tamin'ny 1 Gb fotsiny ho an'ny fametrahana rindranasa sy lalao ary 12 Gb ho fitahirizana atiny multimedia sy rakitra. Fanohanana MicrSD hatramin'ny 4 Gb
Conectividad DualSIM - LTE - 3G - 2G - Bluetooth - Wifi - GPS ary a-GPS - USB OTG
Fakan-tsary Rear 13 mpx miaraka amin'ny FlashLED
Hateviny 7 mm
vidiny 125 Euros eo ho eo.
Ny tsara indrindra amin'ny Doogee Ibiza F2
Ny tsara indrindra tsy misy fisalasalana an'io Doogee Ibiza F2 hitantsika izy io amin'ny fiasa mahery vaika amin'ny rafitra fiasa Android 4.4.4 Kit Kat noho ny azy processeur quat-core Mediatek matanjaka miaraka amin'ny haitao 64-bit izay fitoviana amin'ilay processeur Qualcomm Snapdragon 410 izay noderaina teny amin'ny terminal toy ny Motorola ao amin'ny Moto E 2015 na xiaomi ao amin'ny RedMi vaovao.
Etsy ankilany, zavatra iray hafa hanasongadinana ity fitaovana ara-toekarena ity izay nampitarihany azy ireo ho an'ny besinimaro, dia hitantsika ao amin'ny ny kalitaon'ny fakantsarinao na eo alohan'ny 5 mpx na ao ambadiky ny 13 mpx izay holazaina ny marina dia maka sary tsara kalitao izy ireo na dia amin'ny hazavana ambany aza.
Ny lafiny iray hafa hanasongadinana ity terminal ity dia miompana amin'ny toekarena tsy dia manankarena loatra, azontsika jerena ao amin'ny sehatry ny fifandraisana izay ankasitrahany. mifanentana amin'ny tamba-jotra LTE na 4G ary ny fampidirana ny fifandraisana USB OTG.
Ary farany, amin'ny maha-zavatra tsy maintsy asongadintsika amin'ny lafy tsara, dia ireo fiasan'ny tovolahy ao amin'ny Doogee izay hanampy antsika fehezo ny efijery sy ny fihetsika ataontsika amin'ny fihetsika na ny fampidirana fizarana vaovao ao amin'ny fikirana Android izay ahafahanay manamboatra ny fitsitsiana bateria hahazoana fampisehoana tsaratsara kokoa noho izany izay irianay kely ny zara raha misy.
Ny ratsy indrindra amin'ny Doogee Ibiza F2
Ao amin'ny fizarana ny ratsy indrindra amin'ity Doogee Ibiza F2 ity, Ny tena tsy maintsy asongadinay ary manelingelina anay be loatra satria terminal eo amin'ny fampisehoana mahery vaika izy io, ilay fahatsiarovana anatiny kely navelan'izy ireo ho an'ny fametrahana rindranasa sy lalao, ary zara raha misy 1,2 Gb misy tahiry anatiny misy, afaka hametraka rindranasa vitsivitsy sy lalao vitsivitsy dia vitsy isika.
Lafiny iray hafa hitsikerana sy hanasongadinana, amin'ny lojika no ahitantsika azy ao amin'ny bateriny, a bateria tsy misy afa-tsy 2000 mAh ihany izay manome antsika fahaleovan-tena ambony indrindra amin'ny efijery mandritra ny adiny telo mifehy ny fifandraisana ampiasainay ary mametraka ny famirapiratan'ny efijery amin'ny ambaratonga faran'izay kely indrindra amin'ny famirapiratana.
Farany ary angamba kely indrindra dia hitantsika amin'ny kalitaon'ny feo amin'ny fitaovana, izay toa malemy loatra amintsika, fa na dia any amin'ireo toerana tsy misy tabataba kely aza dia heno tsara dia tsara, amin'ny toerana misy tontolo be tabataba dia mamela zavatra be faniry.
Endri-javatra Doogee miavaka
Mbola Android 4.4.4 Kit Kat
Batterie ambany 2000 mAh ihany
Malemy loatra ny feo any amin'ny toerana mitabataba
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Avereno jerena ny Doogee Ibiza F2, ilay QuadCore 64-bit amin'ny $ 129,99 fotsiny
Ny olana voalohany amin'ny Samsung Galaxy S6: ny jiro LED an'ny singa sasany dia tsy maty mihitsy
OnLeaks dia manambara famoahana Xperia Z4 bebe kokoa